ဂ်ဴဗင္တပ္ကို ျပန္လာျခင္းက ဘာ့ေၾကာင့္ အရမ္းကို ခမ္းနား ေနသလဲဆုိတာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ #ဘူဖြန္ — Sports Myanmar
ဂ်ဴဗင္တပ္ကို ျပန္လာျခင္းက ဘာ့ေၾကာင့္ အရမ္းကို ခမ္းနား ေနသလဲဆုိတာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ #ဘူဖြန္
July 5, 2019 - by Edi Tor
တူရင္ ေျမမွ ထြက္ခြာတာ တစ္ႏွစ္သာ ရွိေန ေသးတဲ့ အီတလီ ဂႏၶဝင္ ဘူဖြန္ ဟာ အခုေတာ့ တစ္ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ နဲ့ အတူ ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္း ဆီ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ့ နုိင္ခဲ့ ပါျပီ ။ အဆုိပါ စာခ်ဳပ္ နဲ့ အတူ ဘူဖြန္ ဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္း မွာ 2020 ဇြန္လ 30 ရက္ ေန့ အထိ ရွိေန ေတာ့မွာ ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။
အခုေတာ့ ဘူဖြန္ က တူရင္ ေျမမွာ ထူးကဲ တဲ့ နည္းျပ ဆာရီ ေအာက္ ေပၚတူဂီ လက္ေရြးစင္ စီ ေရာ္နယ္ဒို နဲ့ အတူ ကစား ရျခင္း က တစ္ကယ့္ ကို ခမ္းနား တဲ့ အရာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဆာရီ ဟာ သူ့ အေပၚ တစ္ကယ့္ ကို ေကာင္းမြန္ လွတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့ ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကား သြားခဲ့ ပါတယ္ ။
” ခရစၥတီယာနုိ နဲ့ အတူ ကစား ရျခင္း ဆုိတာ တစ္ကယ့္ ကို ခမ္းနား လွ ပါတယ္ ။ က်ြန္ေတာ္ ဟာ ျပီး ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုး ရာသီ တုန္းက PSG အသင္း မွာ ေနမာ ၊ အမ္ဘက္ပီ တုိ့လို ခ်န္ပီယံ ေတြနဲ့ အတူ ကစား ခဲ့ရ ပါတယ္ ။ အခုေတာ့ ဂ်ဴဗီ ကို ေက်းဇူး တင္ ပါတယ္ ၊ က်ြန္ေတာ္ ေရာ္နယ္ဒို နဲ့ ကစားရ လိမ့္မယ္ ေလ ၊ ဒါဟာ တစ္ကယ့္ကို ခမ္းနား တဲ့ လက္ေဆာင္ မြန္ တစ္ခု ပါပဲ ”
” က်ြန္ေတာ္ နည္းျပ ဆာရီ နဲ့ ေတြ့ခဲ့ ပါ ေသးတယ္ ။ သူဟာ က်ြန္ေတာ့္ အေပၚ တစ္ကယ့္ ကို ထူးကဲ ေကာင္းမြန္ တဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့ ပါတယ္ ။ သူ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ရွိတဲ့ ေန့ ေတြမွာ အျခား သူေတြ အေပၚ ထားရွိ တဲ့ တူညီ တဲ့ စိတ္ထား မ်ိဳး က်ြန္ေတာ့္ အေပၚ လည္း ထားခဲ့ ပါတယ္ ”
” ခင္ဗ်ား ဟာ ေဘာလံုး ရာသီ တစ္ခုကို စတင္ တာနဲ့ ခ်န္ပီယံ လိဂ္ ဖလား ဆြတ္ခူး ရမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ နဲ့ စတင္ လို့ မရ နုိင္ ပါဘူး ။ ဘာျဖစ္လို့လဲ ဆုိေတာ့ အဲ့တာ က ရာသီ ကို အရွံဳး နဲ့ စတင္ ရတာ နဲ့ တစ္ကယ့္ ကို ညီမ်ွ ေနလို႔ ပါပဲ ”
” သိပ္ ဟုတ္တာ ေပါ့ ၊ ဒါဟာ တစ္ကယ့္ ကို ၾကီးက်ယ္ တဲ့ ၊ ဂုဏ္ ရွိတဲ့ ဆု ဖလား တစ္ခု ပါ ။ ဒါေပမယ့္ ဖုိင္နယ္ ပြဲ ဆုိတာ ေမ လ အကုန္ ေလာက္ ၊ တစ္ခါတေလ ဇြန္လ အစ ေလာက္မွာ ေတာင္ ကစား ရ ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီ ၾကားထဲ မွာ က်ြန္ေတာ္ တုိ့ ေတြဟာ တစ္ကယ့္ ကို အေရးၾကီး လွတဲ့ အခ်ိန္ 10 လတာ ကို ျဖတ္သန္း ၾကရ မယ္ေလ ” လို့ ဘူဖြန္ က ခ်န္ပီယံ လိဂ္ ဖလား ဆြတ္ခူးေရး နဲ့ ပတ္သက္လို့ ေျပာၾကား သြားခဲ့ ပါတယ္ ။
အဲ့ဒီေနာက္ အသင္းေဖာ္ ခ်ီလီနီ နဲ့ ဆက္ဇ္နီ တုိ့က အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ရာထူး ၊ နံပါတ္ တစ္ ဂ်ာစီ အတြက္ သူ့ကို စကား ေျပာခဲ့ ၾကေၾကာင္း ၊ ဒါေပမယ့္ သူဟာ လက္ခံ မွာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ၊ နံပါတ္ 77 ဂ်ာစီ ကို ဝတ္ဆင္ ဖုိ့ ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ အေၾကာင္း ဘူဖြန္ က ဆုိသြား ခဲ့လိုက္ ပါတယ္ ။
” ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္း တုန္းက အသင္း ေခါင္းေဆာင္ ရာထူး နဲ့ နံပါတ္ တစ္ ဂ်ာစီ အတြက္ က်ြန္ေတာ့္ ကို ကမ္းလွမ္း ခဲ့ ၾကတဲ့ ခ်ီလီနီ နဲ့ ဆက္ဇ္နီ တုိ့ကို က်ြန္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ ။ တစ္ကယ့္ ကို သင့္တင့္ မ်ွတတဲ့ အရာ တစ္ခု က ပြဲထြက္ ကစားခြင့္ ရမဲ့ သူသာ နံပါတ္ တစ္ ျဖစ္သင့္ တာေလ ။ ျပီးေတာ့ ခ်ီလီနီ က က်ြန္ေတာ္ နဲ့ ညီအစ္ကို လို ေနတဲ့ သူပါ ။ သူပဲ အသင္း ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိသင့္ ပါတယ္ ”
” က်ြန္ေတာ့္ ရဲ့ နံပါတ္ က ဘာျဖစ္ လိမ့္မလဲ ? က်ြန္ေတာ္ ကေတာ့ 77 လို့ ေတြး ပါတယ္ ။ အဲ့တာ က က်ြန္ေတာ့္ ပံုျပင္ တစ္ခု ကို ကိုယ္စားျပဳ ပါတယ္ ။ က်ြန္ေတာ္ ပါးမား အသင္း မွာ ကစား ခဲ့တုန္း က အဲ့ဒီ နံပါတ္ ကို ဝတ္ျပီး တစ္ကယ့္ ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဘာလံုး ရာသီ ပိုင္ဆုိင္ ခဲ့တဲ့ အျပင္ ဂ်ဴဗင္တပ္ ဆီကိုပါ ေရာက္လာ နုိင္ခဲ့ တယ္ေလ ” လုိ့ ဘူဖြန္ က နံပါတ္ 77 ဂ်ာစီ ဝတ္ဆင္ လိုတဲ့ အေၾကာင္း ဖြင့္ဟ သြားခဲ့ ပါတယ္ ။
Italian goalkeeper Gianluigi Buffon (L) comes to greet fans outside as he attends the inauguration of the Juventus FC new flagship store in Milan on July 4, 2019. – Buffon has returned to Juventus onaone-year contract afteraseason spent at Paris Saint-Germain. The 41-year-old, who will be number two to Polish ‘keeper Wojciech Szczesny, previously spent 17 season with the Turin club, winning nine Serie A titles and playing three Champions League finals. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)
” က်ြန္ေတာ္ အခုလုိ အိမ္ကို ျပန္လာ ခဲ့ ရတဲ့ အတြက္ ၊ ခင္ဗ်ား တုိ့ အားလံုး ကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ေပြ့ဖက္ ႏွဳတ္ဆက္ ခြင့္ ရရွိ တဲ့ အတြက္ အရမ္း ကို ေပ်ာ္ရႊင္မိ ပါတယ္ ။ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ့္ ဘဝ ရဲ့ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး အခ်ိန္ ပါပဲ ။ အခုေတာ့ ဘဝ ဟာ တစ္ကယ့္ ကုိ ဆန္းက်ယ္တဲ့ အေၾကာင္း ၊ အိပ္မက္ ေတြက ထိုက္တန္ ေၾကာင္း က်ြန္ေတာ္ အတည္ျပဳနုိင္ ပါျပီ ”
” ေကာင္မေလး ရဲ့ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို မျငင္းဆန္ နုိင္သလိုမ်ိဳး က်ြန္ေတာ္ ျပန္လာ ခဲ့ရ ပါတယ္ ။ ဒါဟာ က်ြန္ေတာ့္ ရဲ့ အိမ္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ က်ြန္ေတာ္ ျပန္လာခဲ့ ရတာပါ ” လို႔ ဘူဖြန္ က ဂ်ဴဗင္တပ္ ဆီ ျပန္လာ ခဲ့ ရတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ အေၾကာင္း အထူးညႊန္းဆုိ လိုက္ခဲ့ ပါတယ္ ။
ဂျူဗင်တပ်ကို ပြန်လာခြင်းက ဘာ့ကြောင့် အရမ်းကို ခမ်းနား နေသလဲဆိုတာ ပြောကြားသွားတဲ့ #ဘူဖွန်
တူရင် မြေမှ ထွက်ခွာတာ တစ်နှစ်သာ ရှိနေ သေးတဲ့ အီတလီ ဂန္ဓဝင် ဘူဖွန် ဟာ အခုတော့ တစ်နှစ် စာချုပ် နဲ့ အတူ ဂျူဗင်တပ် အသင်း ဆီ ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ နိုင်ခဲ့ ပါပြီ ။ အဆိုပါ စာချုပ် နဲ့ အတူ ဘူဖွန် ဟာ ဂျူဗင်တပ် အသင်း မှာ 2020 ဇွန်လ 30 ရက် နေ့ အထိ ရှိနေ တော့မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အခုတော့ ဘူဖွန် က တူရင် မြေမှာ ထူးကဲ တဲ့ နည်းပြ ဆာရီ အောက် ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် စီ ရော်နယ်ဒို နဲ့ အတူ ကစား ရခြင်း က တစ်ကယ့် ကို ခမ်းနား တဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဆာရီ ဟာ သူ့ အပေါ် တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ ထင်မြင်ချက် ပေးခဲ့ ကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” ခရစ္စတီယာနို နဲ့ အတူ ကစား ရခြင်း ဆိုတာ တစ်ကယ့် ကို ခမ်းနား လှ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက PSG အသင်း မှာ နေမာ ၊ အမ်ဘက်ပီ တို့လို ချန်ပီယံ တွေနဲ့ အတူ ကစား ခဲ့ရ ပါတယ် ။ အခုတော့ ဂျူဗီ ကို ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ၊ ကျွန်တော် ရော်နယ်ဒို နဲ့ ကစားရ လိမ့်မယ် လေ ၊ ဒါဟာ တစ်ကယ့်ကို ခမ်းနား တဲ့ လက်ဆောင် မွန် တစ်ခု ပါပဲ ”
” ကျွန်တော် နည်းပြ ဆာရီ နဲ့ တွေ့ခဲ့ ပါ သေးတယ် ။ သူဟာ ကျွန်တော့် အပေါ် တစ်ကယ့် ကို ထူးကဲ ကောင်းမွန် တဲ့ ထင်မြင်ချက် ပေးခဲ့ ပါတယ် ။ သူ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ရှိတဲ့ နေ့ တွေမှာ အခြား သူတွေ အပေါ် ထားရှိ တဲ့ တူညီ တဲ့ စိတ်ထား မျိုး ကျွန်တော့် အပေါ် လည်း ထားခဲ့ ပါတယ် ”
” ခင်ဗျား ဟာ ဘောလုံး ရာသီ တစ်ခုကို စတင် တာနဲ့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး ရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ စတင် လို့ မရ နိုင် ပါဘူး ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့တာ က ရာသီ ကို အရှုံး နဲ့ စတင် ရတာ နဲ့ တစ်ကယ့် ကို ညီမျှ နေလို့ ပါပဲ ”
” သိပ် ဟုတ်တာ ပေါ့ ၊ ဒါဟာ တစ်ကယ့် ကို ကြီးကျယ် တဲ့ ၊ ဂုဏ် ရှိတဲ့ ဆု ဖလား တစ်ခု ပါ ။ ဒါပေမယ့် ဖိုင်နယ် ပွဲ ဆိုတာ မေ လ အကုန် လောက် ၊ တစ်ခါတလေ ဇွန်လ အစ လောက်မှာ တောင် ကစား ရ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ ကြားထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ တွေဟာ တစ်ကယ့် ကို အရေးကြီး လှတဲ့ အချိန် 10 လတာ ကို ဖြတ်သန်း ကြရ မယ်လေ ” လို့ ဘူဖွန် က ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူးရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် အသင်းဖော် ချီလီနီ နဲ့ ဆက်ဇ်နီ တို့က အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာထူး ၊ နံပါတ် တစ် ဂျာစီ အတွက် သူ့ကို စကား ပြောခဲ့ ကြကြောင်း ၊ ဒါပေမယ့် သူဟာ လက်ခံ မှာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်း ၊ နံပါတ် 77 ဂျာစီ ကို ဝတ်ဆင် ဖို့ ရွေးချယ် ထားတဲ့ အကြောင်း ဘူဖွန် က ဆိုသွား ခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်း တုန်းက အသင်း ခေါင်းဆောင် ရာထူး နဲ့ နံပါတ် တစ် ဂျာစီ အတွက် ကျွန်တော့် ကို ကမ်းလှမ်း ခဲ့ ကြတဲ့ ချီလီနီ နဲ့ ဆက်ဇ်နီ တို့ကို ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင် ပါတယ် ။ တစ်ကယ့် ကို သင့်တင့် မျှတတဲ့ အရာ တစ်ခု က ပွဲထွက် ကစားခွင့် ရမဲ့ သူသာ နံပါတ် တစ် ဖြစ်သင့် တာလေ ။ ပြီးတော့ ချီလီနီ က ကျွန်တော် နဲ့ ညီအစ်ကို လို နေတဲ့ သူပါ ။ သူပဲ အသင်း ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ဆက်လက် ရှိသင့် ပါတယ် ”
” ကျွန်တော့် ရဲ့ နံပါတ် က ဘာဖြစ် လိမ့်မလဲ ? ကျွန်တော် ကတော့ 77 လို့ တွေး ပါတယ် ။ အဲ့တာ က ကျွန်တော့် ပုံပြင် တစ်ခု ကို ကိုယ်စားပြု ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ပါးမား အသင်း မှာ ကစား ခဲ့တုန်း က အဲ့ဒီ နံပါတ် ကို ဝတ်ပြီး တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့တဲ့ အပြင် ဂျူဗင်တပ် ဆီကိုပါ ရောက်လာ နိုင်ခဲ့ တယ်လေ ” လို့ ဘူဖွန် က နံပါတ် 77 ဂျာစီ ဝတ်ဆင် လိုတဲ့ အကြောင်း ဖွင့်ဟ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” ကျွန်တော် အခုလို အိမ်ကို ပြန်လာ ခဲ့ ရတဲ့ အတွက် ၊ ခင်ဗျား တို့ အားလုံး ကို တစ်ဖန် ပြန်လည် ပွေ့ဖက် နှုတ်ဆက် ခွင့် ရရှိ တဲ့ အတွက် အရမ်း ကို ပျော်ရွှင်မိ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် ဘဝ ရဲ့ အပျော်ရွှင်ဆုံး အချိန် ပါပဲ ။ အခုတော့ ဘဝ ဟာ တစ်ကယ့် ကို ဆန်းကျယ်တဲ့ အကြောင်း ၊ အိပ်မက် တွေက ထိုက်တန် ကြောင်း ကျွန်တော် အတည်ပြုနိုင် ပါပြီ ”
” ကောင်မလေး ရဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို မငြင်းဆန် နိုင်သလိုမျိုး ကျွန်တော် ပြန်လာ ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကျွန်တော့် ရဲ့ အိမ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့ ရတာပါ ” လို့ ဘူဖွန် က ဂျူဗင်တပ် ဆီ ပြန်လာ ခဲ့ ရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အကြောင်း အထူးညွှန်းဆို လိုက်ခဲ့ ပါတယ် ။